မင်းရဲ့တိုက်ခန်းမှာကြိုးမဲ့ WI-FI ရောက်တာကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။ ၎င်းကိုစင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းကိုဖုန်စုပ်ပါ။ ပံ့ပိုးသူသည်၎င်းနှင့်ဘာလုပ်ရမည်။ သင်ကိုယ်တိုင် router ထဲကို password ထည့်လိုက်တယ်။ ... အကယ်၍ …
Photoshop တွင်အရာဝတ္ထုအရောင်များကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။ Russian menu ကောင်းပြီ၊ Photoshop မှာအရာဝတ္ထုတွေမရှိဘူး။ အကယ်၍ သင်သည် layer များကိုဆိုလိုသည်ဆိုပါက layer များပါ ၀ င်းဒိုးကိုရွေးချယ်ပါ၊ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်စက်ဝိုင်းပေါ်တွင်နှိပ်ပါ ...
ကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုကို re-index လုပ်ဖို့ Yandex ကိုဘယ်လိုတွန်းအားပေးမလဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Yandex ဟာအချိန်ကာလတစ်ခုသတ်မှတ်ထားပြီးနောက်မှာ site ကို index ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာသင်: ပထမလအတွက် site ပေါ်တွင်သဘာဝလှုပ်ရှားမှုဖန်တီးရန်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ...
raster နှင့် vector graphics programs တို့အားဥပမာပေးပါ။ Illustrator - vector editor photoshop, paint - raster ဤတွင်သင်သည်ပရိုဂရမ်အမျိုးအစားများကိုယူဆောင်လာနိုင်သည်။ Vector ဂရပ်ဖစ်တည်းဖြတ်သူများ MSO Visio, Sketsa SVG Editor / ...
Flash Drive တွင်ပြသနာများပြည့်နှက်နေကြောင်းကွန်ပျူတာမှပြသသော်လည်းဖိုင်များမမြင်နိုင်ပါ။ 7,2 Gb ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများ Flash drive နှင့်ပတ်သက်သောပြProbleနာများစီမံကိန်းအုပ်ချုပ်ရေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် (link ကိုဖယ်ရှားပါ) Repairman ၏မှတ်စုများသည် link ကိုပိတ်ဆို့ထားပါသည်။
WebMoney မှ Qiwi သို့ငွေမချိတ်ပဲငွေလွှဲနိုင်ပါသလား။ အကယ်၍ သင်ဤ ဦး တည်ချက်အတွက်ချက်ချင်းဖလှယ်လိုပါက၊ သင်သည် http://www.obmenik24.ru အရည်အသွေးကိုဤနေရာတွင်ရောက်ရှိနေပြီးချက်ချင်းလဲလှယ်မှုပြုလုပ်လိမ့်မည်၊ အခွင့်အလမ်းလည်းရှိသည်။
Bios ကို Lenovo G500 တွင်မည်သို့ဝင်ရမည်နည်း။ http://www.youtube.com/watch?v=BbVWb0IbLYQ ပါဝါခလုတ်ဘေးရှိခလုတ်ငယ်ကိုနှိပ်ပါ Windows 8 နှင့်တပ်ဆင်ထားသောစနစ်များတွင် UEFI setup ဖန်သားပြင်များကိုသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ကုဒ် 740 တောင်းဆိုထားသောစစ်ဆင်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါသည်ဘာလဲ ??? ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားမကူညီနိုင်ပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအားဖြင့်သင်ဖွင့်ထားသောဂိမ်းများနှင့်ပရိုဂရမ်များသည် ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းအတွက်ဖန်တီးထားသည် ...
ကွန်ပြူတာတစ်ခုပေါ်မှာစာမျက်နှာတစ်ခုရဲ့ပုံတစ်ပုံကိုဘယ်လိုရိုက်မလဲ။ ဘယ်သော့တွေကိုနှိပ်သင့်သလဲ။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ကိုနှိပ်ပါ၊ မျက်နှာပြင်ပုံသည် clipboard ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းတွင်မဆိုကူးယူပြီး၎င်းကိုလုပ်ပါ။
ကွန်ပျူတာကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ။ သင်အဲဒါကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ သင် utility ကိုသွင်းလိုက်ပြီ၊ တကယ်တော့ဒါက software package တစ်ခုဖြစ်သည်။ NeoUtilites၊ သင် Cleanup Manager ကိုစတင်သည်၊ သန့်ရှင်းသော registry အမှားများ၊ disk အမှားများ၊ စာရင်းအမှားများကိုအလှည့်ကျလုပ်လိုက်သည်။ အားလုံးရိုးရှင်းပြီးဘာမှမ ...
လူတစ်ယောက်၏မိုဘိုင်းနံပါတ်ဖြင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း။ အကယ်၍ သင်သည်ချစ်စရာကောင်းသော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်လမ်းညွှန်ရှာဖွေခြင်းကိုဂူဂဲလ်မှအသေးစိတ်သိရှိရန်ခေါ်ဆိုသည်။ ရဲ၊ မင်းဒါသိထားသင့်တယ် ကျန်တဲ့သူတွေကိုမဖြေဖို့အကြံပေးတယ် ...
အလွန်ကောင်းသောဂိမ်းကွန်ပျူတာမည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။ PC စွမ်းအားပြည့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်သည်ဒေါ်လာ ၅၀၀ နှင့်အထက်ကုန်ကျသည်။ သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်အရွယ်အစားသည်အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာ ၁၂၀၀ ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သောစွမ်းအားကြီးသောကွန်ပျူတာထက်စွမ်းအားကြီးသောကွန်ပျူတာ ၁။ ၁။ Intel Core ... Processor
ကာတွန်းပုံကိုမည်သည့်အစီအစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုပြောပြပါ။ Intocartoon Pro သည်ရိုးရှင်းသည့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ဓာတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုကာတွန်းနှင့်အဖြူရောင်စသည့်ပုံစံများဖြင့်အမျိုးမျိုးသော filter များ သုံး၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ထောက်ပံ့ပေးထားသောပုံစံများ ...
လက်ပ်တော့ပ်ပေါ်ရှိဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခု၏ဖန်သားပြင်ကိုမည်သို့ယူရမည်နည်း။ နည်းလမ်း ၁။ PrScr ခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံသာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Screen Screen ကိုပုံနှိပ်ရန် Print Screen ကိုဆိုလိုသည်။ ခလုတ်သည်ကီးဘုတ်၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်ရှိသည်။ ကီးဘုတ်အချို့မှာ ...
Microsoft Power Point7ရှိအဖြူရောင်နောက်ခံကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်အားပြောပြပါ။ ?? ဒီ feature ကို "format" tab မှာ, Power Point 2010 သာရရှိနိုင်ပါသည်။ မွမ်းမံလိုသည်ဆိုပါက ...
ကျပန်း access ကိုမှတ်ဉာဏ်အမျိုးအစားများ။ static SRAM နှင့် dynamic DRAM အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ Dynamic type memory (DRAM (Dynamic Random Access Memory)) ။ အဓိကဆောင်းပါး - DRAM ၏စီးပွားရေးအမျိုးအစားမှတ်ဉာဏ်။ ရိနာစွဲသိမ်းဆည်းရန် ...
ကွန်ပျူတာပန်ကာကိုလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းဆူညံသံမဖြစ်စေရန်မည်သို့နှင့်မည်ကဲ့သို့ချောဆီချသင့်သနည်း။ Molykote လိုင်းတွင်ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ချောဆီပါဝင်သည်။ သူတို့ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်တယ်။ အအေးပန်ကာကိုမချခင် ...
သင်၏ HP operating system အတွက်ဒရိုင်ဘာကို download လုပ်ပါ။ HP laser laser 1536dnf ပရင်တာတွင် vn idm ကိုကြည့်ပါ။ ထည့်သွင်းထားသောပရင်တာ၊ ကွန်ယက်မှဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဒရိုင်ဘာကိုစတင်ထည့်သွင်းသောအခါ၊
ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကိုဆန့်ထုတ်လိုက်ပြီးကျောက်စာတွေလည်းမှုန်ဝါးလာတယ်။ ဘာလုပ်မလဲ? Screen ကို resolution ပြောင်းလိုက်ပါ - Properties ကိုပြောင်းပါ။ ဒါမှမဟုတ် driver ကို videocard ထဲကိုထည့်ပါ။ Click-Start-all programs-standard-service-system recovery ။ အလုပ်လုပ်သည့်နေ့စွဲကိုရွေးချယ်ပါ။
Photoshop ၏စမ်းသပ်မူကိုရုရှားစမ်းသပ်မှုဖြင့် Adobe.com အခမဲ့ရယူနိုင်သည့်နေရာ - tabulorasa.info/170306-photoshop-cs5-fotoshop-na-russkom-yazyke.html Adobe ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.adobe.com/ Company RUSSIA ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ Adobe - http://www.adobe.com/ru/ တွင်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနံပါတ် ...
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,053 စက္ကန့်ကျော် Generate ။